Joe Biden “Waan ku kalsoonnahay inaan guulaysan doonno” | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Joe Biden “Waan ku kalsoonnahay inaan guulaysan doonno”
Joe Biden “Waan ku kalsoonnahay inaan guulaysan doonno”
Joe Biden ayaa mar kale sheegay in uu ku kalsoon yahay guusha maaddaama uu kusii dhawaanayo inuu garaaco Donald Trump kadib doorashadii madaxtinnimada ee Talaadadii ka dhacday Mareykanka.
Tartamahan xisbiga Dimuqraadiga wuxuu hadda heystaa 253 ka mid ah 270 Codadka Ergada Codbixinta ee loo baahan yahay, si uu u aadp Aqalka Cad iyadoo loo marayo nidaamka codbixinta ee gobol-gobolka ku dhisan ee Mareykanka.
Mr Biden ayaa sidoo kale hogaaminaya tirinta codadka ee goobaha muhiimka u ahaa doorashada ee Georgia, Nevada, Pennsylvania iyo Arizona.
Guusha Biden waxay u muuqan doontaa Mr Trump inuu xafiiska ka tago Janaayo kaddib afar sano oo uu xilkaasi hayey.
“Waan ku guuleysaneynaa tartankan,” Mr Biden ayaa u sheegay taageerayaashiisa Wilmington, Delaware, habeenkii jimcaha, isagoo ku dhawaaqaya in kalsoonidoodu sii kordheyso, ayna codbixiyayaashu ay muujinayaan inuu hogaaminayo isagu.
Wuxuu sheegay inuu ku socdo waddadii uu ku guuleysan lahaa in ka badan 300 oo Ergada codbixinta ah wuxuuna tilmaamay in dad badan ay u codeeyeen – in ka badan 74 milyan oo qof – kuwaas oo ka badan marka loo eego qof kasta oo u tartamay madaxtinimada Mareykanka, taariikh ahaan.
Dimuqraadigan – oo isu tixgeliya inuu yahay musharraxa midnimada ka dib ololihii qadhaadhaa ee uu soo halgamay – ayaa sheegay in la joogo xilligii “la saari lahaa fkala duwanaanshaha Fekerka siyaasaddayada” oo “la noqon lahaa sokeeye midba midka kale xigsado”
“Waxaan noqon karnaa kuwa iska soo horjeeda laakiin ma nihin cadaw, waxaan nahay Mareykan,” ayuu yiri Mr Biden, oo aan soo hadal qaadin ninka la tartamaya ee Jamhuuriga, Mr Trump.
Weriyaha BBC Barbara Plett-Usher, oo ku sugan Wilmington, ayaa sheegtay in ay ahaayeen hadalo rajo leh oo ka dhigan xisbiga Dimuqraadiga in haysto waddadii guusha.
Mr Biden – oo laba jeer oo hore u tartamay Aqalka Cad, sannadihii 1988 iyo 2008, guul la’aan – wuxuu noqonayaa madaxweynihii ugu da’da weynaa ee abid la caleemo saaro isagoo jira 78 sano.
Haddii Dimuqraadigan lagu dhawaaqo inuu guuleystey dhammaadka labada maalmood ee soo addan, kooxdiisa ayaa la filayaa inay bilawdo hawlihii kala-guurka maalinka Isniinta
Musharrax Joe Biden ayaa ku hormaray codadka laga tiriyay gobolka Pennsylvania, isagoo in ka badan lix kun oo cod ku hogaaminaya Donald Trump.
Waa gobol muhiim u ah loolanka madaxtinnimada Maraykanka ee ay ku tartamayaan Biden iyo Trump.
Haddii uu Biden ku guulaysto Pennsylvania, waxaa uu ku guulaysan doonaa tartanka isagoo noqon doona madaxweynaha la doortay.
Gobolkaas ayaa leh 20 cod oo ah ergada doorashada, iyadoo inta la xaqiijiyay uu Biden heysto 253 codadkaas ah, uuna u baahan yahay 17 cod oo keliya.
Trump ayaa isla maanta lumiyay codadkii uu ku hogaaminayay gobolka kale ee muhiimka ah ee Georgia.
Natiijada rasmiga ah ayaan la hubin xilliga ay soo bixi doonto.
Halka la kala marayo:
Gobolka Pennsylvania, Biden ayaa 6,817 ka horreeya Trump, iyadoo la tiriyay 98% codadkii la dhiibtay. Dadka ka faalooda doorashada ayaa rumaysan in codadka haray oo ah kuwa lagu dhiibtay boostada ay guusha ku raaci karto Biden. Haddii uu Biden ku guulaysto gobolkan waxa uu gaari doonaa 270-ka cod ee laga rabo.
Biden ayaa ku horreeya gobolka Georgia oo codadkiisa la tiriyay 99%. Waxaa dhiman tirinta qiyaastii 8,197cod.
Biden ayaa sidoo kale hogaanka u haya gobolka Nevada, iyadoo la tiriyay 89%. Waxaa harsan tirinta ku dhawaad 190,000 oo cod.
Gobolka Arizona, iyadoo 90% la tiriyay codadka ayaa Biden waxa uu ku hogaaminayaa 1.6%.
Biden ayaa u baahan inuu xaqiijiyo guusha Pennsylvania, ama Georgia, Nevada iyo Arizona si uu ugu guulaysto tartanka madaxtinnimada.
Previous articleGudiga Doorashada Galmudug oo Fahad Yaasiin magacowday dhamaantood:*
Next articleAmmaanka goobaha tirinta codbixintu ka socoto oo aad loo adkeeyay
Midawga Musharrixiinta ayaa ku baaqay in lagu dhaqmo heshiiska dowlad gobaleeydad iyo dowladda federaalku ay ka gaareen arrimaha doorashooyinka laga digtoonaado faragelinta dowlad gobaleedyada. https://youtu.be/ZrrideXJAFg
Marxuumad Xamdi Maxamad oo Kufsi wadareed iyo 6 dabaq laga soo...
Ciidamadii Dowlada Federaalka oo Qaab kala shakin ka dhex bilaabatay
Barasaabka Pennsylvania oo dhegaha ka fureystay baaqa Trump ee ah in...